राँके रबि भेडेटार सडकको कालोपत्रेका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पाँचथरको रबीमा सडक कालोपत्रेको शिलान्याश गर्नु भएको छ ।
शिलन्यास कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान मन्त्री ओलीले नेपालको विकासको नयाँ अभियान थालेको बताउनु भयो । दिगो सरकार बनेकाले अब जनताले बिकास निमार्णका बिषयमा कुनै चिन्ता नलिन आग्रह गर्नु भएको थियो । प्रधान मन्त्री ओलीले नेपालका सबै जिल्ला दुई बर्ष भित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने बताउनु भयो ।
प्रधान मन्त्री ओलीले नेपालमा पानी जहाज ल्याउने कामको थालनी भई सकेको बताउनु भएको छ । केही समय भित्रमा नेपालीका पानी जहाज हुने बताउनु भएका ओलीले तमोर हाई ड्याम समेत बाधेर जलबिहार र बिद्युतको सम्भावना खोजिने बताउनु भयो । प्रत्येक दिन नेपाल बिकासको नयाँ गतिमा अगाढी बढेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पाँचथर जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साँसद बसन्तकुमार नेम्बाङले पाँचथर जिल्लालाई उज्यालो जिल्ला बनाउने काम समेत थालिएको बताउनु भएको थियो । जिल्लाका अधिकाँस गाउपालिकामा विद्युत प्रशारण लाइन जडानको काम समेत भई रहेको बताउनु भयो । जिल्लामा बिद्युत प्रशारण लाईका लागि एक अर्व भन्दा बढी लगानीमा काम भई रहेका बताउनु भयो । साँसद नेम्बाङले बाटो निर्माणका काममा जनताहरु काम हुदैन कि भन्ने अलमलमा नपर्न अनुरोध गर्दै भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा संसदिय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्बाङ, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधनराई, धन्कुटाबाट प्रतिनिधि सभाका संसद राजेन्द्र राई, प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, प्रदेश सभाका साम्सदहरु सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरुको समेत को उपस्थिति रहेको थियो ।
राँके देखि भेडेटारसम्मको एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरुवात गरिएको हो। तीन वर्ष भित्रमा कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई अघि बढाइएको हो। यो सडकले पाँचथरसहित इलाम, धनकुटाका जनताहरु प्रत्यक्षरुपमा लावान्भीत हुने छन् । लामो समय देखि यो सडक बनाउने जनतालाई आशा देखाएको यो सडक कालो पत्रे गर्ने कामको प्रधान मन्त्री ओलीले आज शिलन्यास गरे सँगै जनता चिल्लो सडकमा गाडी गुडाउने सपना देख्न थालेका छन् ।
सडक सुधार तथा विकास योजना निर्देशनालयमार्फत सडक कालोपत्रेको कामलाई अघि बढाइको हो। तीन करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । भेडेटारदेखि राँकेसम्म क्लास थ्री फिडर रोड निर्माण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सडकको शिलान्यास गरेका हुन्।
नौ मिटर फराकीलो सडकमध्ये सात मिटर चौडाई कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। कालोपत्रे गर्ने कामको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी एपीसीओ इन्फ्राटिच प्राइभेट लिमिटेडले पाएको छ ।